Dagaal lafo dirir ah oo u dhaxeeya Militariga Pakistan iyo Nawaz Shariif - BBC News Somali
Dagaal lafo dirir ah oo u dhaxeeya Militariga Pakistan iyo Nawaz Shariif
Image caption Nawaas Shariif
Wargeyska ugu weyn, uguna saamaynta badan dalka Pakistan ee Dawn ayaa cadaadis weyn lagu hayaa todobaadyo ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya.
Waxaa wargeyska laga mamnuucay in lagu qeybiyo guryaha ay maamusho shirkadda ay ciidanka leeyihiin ee DHA iyo waliba guryaha u dhow xerooyinka ciidanka.
Sababta waxaa lagu sheegay in wargeyskan uu wareysi la yeeshay Nawaaz Shariif, ra'isulwasaarihii hore ee Pakistan, kaas oo sheegay in uu aad ula yaabay in 160 qof oo rag mintidiin ah loo ogolaaday in ay ka gudbaan xuduudda Hindiya, kadibna weeraro ka geystaan magaalada Mombai.
Waxa kale oo uu wareysiga ku sheegay in ay qalad ahayd in la siidaayo dadkii loo heystay in ay ka dambeeyeen weerarkii hotel Taj Mahal ee dalka Hindiya sanadkii 2008-dii.
Falalkan ayaa aad loogu eedeeyaa ciidamada militariga Pakistan, kuwaas oo sidoo kale la tuhunsanyahay in ay hoosta ku heystaan kooxaha xag jirka ah, kuwaas oo la sheego in loo isticmaalo in ay waxyeeleeyaan dalalka loo arko in ay cadawga yihiin, gaar ahaan Hindiya.
Ra'iisal wasaarihii Pakistan Nawaz Shariif oo xilka iska casilay
Waxaa la sheegayaa in militariga ay aad uga xumaadeen hadaladaas kasoo yeeray Nawaaz Shariif ee uu wargeyska daabacay.
Waxaa kale oo xayiraado la saaray taleefishinka Geo , kaas oo lala xiriiriyo in uu u dhowyahay Shariif, waxaana laga saaray qadka shirkadaha qeybiya fiilooyinka.
Nawaas ayaa ciidanka ku eedeeya in ay iyagu soo maleegeen fadeexadihii sababta u ahaa in isaga xilka laga tuuro.
Ma uusan qarsanin eedeymaha ku wajahan militariga ee ah in ay hoosta ku heystaan kooxaha mintidiinta Pakistan.
Waxybaaha militariga walwalka ku haya ayaa waxaa ka mid ah in taageerada loo hayo Shariif aysan marnaba hoos u dhicin illaa markii xilka uu ka dagay, lagana yaabo in uu markale ku guuleysto doorashooyinka soo socda haddii aanan la hor istaagin.
Waxaa kale oo jirta in uu si joogto ah u dhaleeceeyo iyaga, sheegana dhaliilahooda.
Culees kale ayaa haysta militariga, kaasna waa urur cusub oo kacdoon dadweyne ah oo lagu magacaabo PTM, kaas oo u dagaalama xuquuqda dadka Pashtun-ka ah, sheegayna in militariga ay laayaan dadka beeshaas kasoo jeeda.
Waxa ay dhigayeen isu soo baxyo waaweyn oo ku shaacinayaan arrimo badan oo ay xog wanaagsan ka hayaan, iyaga oo farta ku godaya ciidammada.
Tani waxa ay ka dhigantahay in militariga ay dagaal adag markaliya ka wada wajahayaan labo dhinac oo bulshada rayidka kaga imanaya.
Halista uu Shariif ku hayo ayaa ah tan ugu badan, sababta oo ah wuxuu hayaa xog aad u badan oo ku saabsan sida militariga ay hawshooda u qabtaan.
Wuxuu xukunka kusoo dhex jiray illaa sanadkii 1980, xilligaas oo uu lasoo shaqeeyay hoggaamiyihii militariga dalkaas Zia Al Xaq.
Horey waxa uu uga mid ahaa dadkii isbahaysiga fiican la la lahaa hay'adda sirdoonka Militariga Pakistan ee ISI, kuwaas oo xitaa la sheegay in ay mar lacag siiyeen.
Shariif wax badan ayuu ogyahay, xitaa waxa uu ogyahay shabakada mujaahidiinta ah ee militariga u direen dalka Afghanistan iyo Hindiya.
Balse su'aasha waxa ay tahay, Shariif ma kashifi doonaa wax kasta oo uu militariga ka ogyahay?.
Suurtagalnimada arrintaas aad ayay u badantahay, waxaana jirta in militariga ay ku lug lahaayeen arrimaha ganacsiyada waaweyn ee Pakistan laga soo bilaabo sanadkii 1980-kii.
Militariga taageero badan ayay gudaha dalkaas ka heystaan, iyaga oo dadka tusa in Hindiya iyo Maraykanka ay cadaw u yihiin.
Balse waayo aragnimada waxa ay muujinaysaa in dadka siyaasiyiinta ah ay awood u leeyihiin in ay caadiyeeyaan xiriirka kala dhaxeeya Hindiya , waa haddii ay si buuxda gacanta ugu hayaan arrimaha maamulka Pakistan.
Hadda dagaalka labada dhinac ka dhaxeeya ayaa saamayn xun ku yeeshay warbaahinta dalkaas, balse waxaa la arki doonaa sida uu xaal ku dambeyn doono.